Ukucubungula Inkokhelo Yeselula | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 12, i-2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Eminyakeni emi-2 ezayo, ama-20% wabo bonke omakhalekhukhwini abathengisiwe bazoba namandla okwenza izinkokhelo nge-NFC (Near Field Communications) .. ubuchwepheshe obuvumela ukuxhawulana nokukhokha kwedijithali lapho idivayisi yakho ibekwe ngaphakathi kwamasentimitha ambalwa wesiginali . Abantu abaningi babikezela ukuthi lokhu kungaba ukuphela kwemali njengoba sazi. Akungabazeki ukuthi kuzoba nomthelela endleleni abathengi abazothenga futhi bathenge ngayo izimpahla ngezitolo!
Iqembu likaGerson Lehrman likusungule lokhu infographic yeSayithi le-G +. Ngokuya ngewebhusayithi yabo:
I-G + ngumphakathi lapho kuthintwa khona abasebenza kakhulu nabanethonya kakhulu emhlabeni, izifundiswa nosomabhizinisi. I-G + inikeza indawo yokuthi abantu bahlanganyele nabantu abanomqondo ofanayo ngezindlela abangazicabangi, baqale izingxoxo ezintsha, babuze imibuzo ebalulekile baphakamise nemibono ku-inthanethi nasemihlanganweni yabantu.
Ukuthengisa + Ukusesha Kwendawo = Wishpond
Jul 12, 2011 ngo-12: 40 PM
G +? Ngethemba ukuthi lo mdlandla we-Google + uyaphela, ngoba i-G + ibonakala njengesifinyezo esamukelekayo se-Google +.
Kunoma ikuphi, i-infographic enhle!